घर अफ्रिकन स्टर्न्स Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य। प्रीमियरलिगमा क्रेडिट
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "Fik“। हाम्रो फिकायो टोमोरी बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
Fikayo Tomori बचपन कहानी- मिति को विश्लेषण। आईजी लाई क्रेडिट
हो, सबैले उसलाई पूर्ण ब्याकको रूपमा हेर्दछन् जसले गल्ती गल्ती गर्छ र कोमा फ्रैंक लम्पर्ड राम्रो छ। यद्यपि केवल थोरैले फिकायो टोमोरिको जीवनीलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरूवात गरेर, उनका पूर्ण नामहरू Oluwafikayomi Oluwadamilola Fikayo Tomori हुन्। तोमोरी, जसलाई उनलाई अक्सर बोलाइन्छ, डिसेम्बर 19 को 1997th दिनमा क्यानाडाको क्यालगारी शहरमा जन्म भएको थियो। तल सानो फिक र उसको सुन्दर आमाको फोटो छ जब उहाँ भर्खरको बच्चा हुनुहुन्थ्यो। एक चेल्सी फ्यान अनुसार, फोटो धेरै नाइजेरियाई छ।
फिकायो टमोरीले उनको बच्चा बोक्दछ जो फिक हुन जान्छ। आईजी लाई क्रेडिट
फिकायो टोमोरी पहिलो बच्चा र उनका प्यारो आमा बुबा श्रीमती श्रीमती ओलुवादिमिला टोमोरीको एक मात्र छोराको रूपमा जन्म भएको थियो जसको परिवार ओस्गबो, ओसुन राज्य, दक्षिण पश्चिम नाइजेरियाबाट भएको हो। उनको जन्म हुनुभन्दा अघि टोमोरीका अभिभावक पहिलो पटक नाइजेरियाको लागोसमा बसोबास गरे जहाँ उनीहरूले उनलाई राखेका थिए। दुबै अभिभावक लेखको समयमा जस्तो ढिलो 40 को लागी देखिन्छ।
फिकायो टोमोरी आफ्ना माता-पितासँगै चित्रित छन्।
पारिवारिक पृष्ठभूमि: फिकायो टोमोरी एक उच्च श्रेणीको पारिवारिक पृष्ठभूमिका हुन्, जसको सम्पत्ति केवल फुटबलमा मात्र बाँधिएको छैन, तर उसको विस्तारित परिवारमा पनि छ जसका सदस्यहरू दक्षिण पश्चिम नाइजेरियामा कडा राजनीतिक प्रभुत्व राख्छन्। तपाईंलाई थाँहा थियो?… टमोरीको एक सदस्यले परिवारलाई नामावली दिए। ओतुन्बा (श्रीमती) अनुग्रह Titilayo Laoye-Tomori, MPA, BA, PGDE ओसुन, नाइजेरिया राज्यका पूर्व नायब राज्यपाल थिए।
Fikayo Tomori धनी चाची- Otunba अनुग्रह Titi Laoye Tomori। ओलिवब्रेन्चलाई क्रेडिट
आफ्नो सुरुको जीवनमा फर्कनुहोस्! क्यानाडामा सात वर्ष बिताएपछि, फिकायो टोमोरीका अभिभावकहरूले नयाँ संस्कृति र वातावरण परिवर्तनको पर्दाफास गर्नुपर्ने महसुस गरे। उनका बाबुआमा आफ्ना छोरासँगै क्यालगरीबाट युनाइटेड किंगडममा बसाई सरेका छन्।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
वर्ष 2004 मा लन्डनमा हुँदा, फिकायो टोमोरी स्कूलमा भाग लिए जसले उनलाई खेल अवधिको समयमा प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। यसले क्यारियरलाई लिनको लागि उनको रुचि निम्त्यायो।
वर्ष 2004 पनि एक कायाकल्प चेल्सी एफसी प्रभुत्व अंग्रेजी फुटबल धन्यवाद धन्यवाद विशेष एक जसले डिडिएर ड्रोग्बा जस्ता अफ्रिकीहरूलाई मन पराउँछन्। उसको परिवारका प्रत्येक सदस्यले क्लब र टमोरीको आफ्नै योजना थियो। उनले लन्डन क्लब एकेडेमीको सदस्य बन्न चाहेकोमा आफ्नो मन बनाएका थिए।
उसको लागि चेल्सी एफसी एकेडेमीमा ट्रायलको लागि चिच्याउनु पर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका भनेको चेल्सी फुटबल स्कूलमा भर्ना हुनु थियो। त्यहाँ हुँदा, स्काउट्सले उनलाई युवा खेलाडीहरूको बीचमा छान्छ र तिनीहरूलाई चेल्सी एफसी विकास केन्द्रमा परीक्षणको लागि आमन्त्रित गरियो।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फिकायो टोमोरीले सात वर्षको बच्चाको रूपमा वर्ष 2001 मा चेल्सी एफसी एकेडेमीमा भाग लिए। सामेल भएपछि, उनी क्लबको अन्डर 8 स्तरमा तैनात थिए। टमोरीले चेल्सीको युवा सेटअपमार्फत सफलतापूर्वक आफ्नो मार्गमा सफलतापूर्वक यात्रा गर्‍यो र आफ्नो क्यारियरको दौडान धेरै छिटो स्थानहरू खडा गर्‍यो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फिकायो टोमोरीले आफ्नो शुरुआती वर्षहरूमा चेल्सी एकेडेमीसँग साथी एकेडेमी खेलाडीसँग सम्बन्ध गाँस्न थाले, टमी अब्राहाम जो उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन। तल चेल्सी एफसी एकेडेमीको साथ उनीहरूको बचपनको वर्षहरूमा दुबै साथीहरूको फोटो छ।
Fikayo Tomori प्रारम्भिक क्यारियर जीवन। Bpi र IG लाई क्रेडिट
समय कसरी उड्छ!। तिनीहरूको मित्रता उनीहरूको किशोर किशोरावस्थामा बढेको जस्तो उनीहरूको शर्ट नम्बरमा देखिन्छ। दुबै प्रारम्भमा, उनीहरूको क्यारियरको सबैभन्दा माथि पुग्ने सपना समातिए, वरिष्ठ टीम। उनीहरूको मित्रताको तुलना गर्न सकिन्छ मेसन माउन्ट र डेक्लान चावल.
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
वर्ष 2015 र 2016 टोमोरीको युवा क्यारियरको मोड बनेको छ। उनले चेल्सी युवा टीमलाई युईएफए युथ लिग र एफए युवा कप दुबै पछाडि पछाडि विजयहरू रेकर्ड गर्नमा मद्दत गरे। ऊ कति राम्रो थियो भनेर देखाउन, टोमोरीले दुबै फाइनलमा गोल गरे र बर्षको 2016 चेल्सी एफसी एकेडेमी खेलाडी घोषित भयो।
टोमोरीको युवा सफलताको कहानी सफलताको क्रममा समाप्त भएन। एक्सएनयूएमएक्समा, उनले आफ्नो इ England्ल्यान्ड यूएक्सएनयूएमएक्स टीमलाई फिफा यू-एक्सएनयूएमएक्स विश्वकप पहिलो पटक दक्षिण कोरियामा भएको घटनामा उनीहरूको इतिहासमा पहिलो पटक जित्यो।
Fikayo Tomori रोड फेम कथा
फेरी अर्को 2018 अर्को युवा सफलता पछ्याईयो। यस पटक, उसले आफ्नो इ England्ल्यान्ड U21 पक्षलाई टुलन प्रतियोगिता जित्न मद्दत गर्‍यो। यी सबै उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि तिनीहरू टोमोरीको दिमागमा अझै डर थिए। अब हामी तिमीलाई बताउँछौं किन।
किन डराउँछ ?: यो राम्रोसँग दस्तावेज गरिएको छ कि चेल्सी एफसी उनको एकेडेमी स्नातक को लागी loanण प्रणाली मन पराउछ, र उनीहरु पहिलो टीम मा खेल्न अनिच्छुक छन्। यो एउटा कारण हो कि डरले सबै एकेडेमी ताराहरूको दिमागमा पक्राउछ जुन क्षणमा उनीहरू पहिलो टीमको लागि पाक मानिन्छन्।
स्नातक एकेडेमी खेलाडी को रूपमा, टोमोरी डर उनको शिकार भयो। ऊसँगै उसको मिल्ने साथी टेमी अब्राहमसँग पर्याप्त खेलको समय पाइन। तिनीहरूलाई अन्य क्लबहरूमा पठाइएको थियो ताकि उनीहरूले अनुभव प्राप्त गर्न सकून्। तोमोरी आफ्नो एकेडेमी बर्षमा सबै भन्दा राम्रो एक भए पनि चेल्सी एफसी loanण सेनाको नयाँ सदस्य भए।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
खेलको समय र अनुभव प्राप्त गर्न को लागी, टोमोरीले लोन द्वारा अधिग्रहण गर्‍यो फ्रैंक लम्पर्ड जो त्यस समयमा डर्बी काउन्टीका हाकिमको रूपमा नियुक्त भए पछि चेल्सी loanण सेनामा छापा मार्ने अभियानमा थिए। लाम्पर्डले टमोरीलाई ट्रस्टमा Tomण आधारमा अधिग्रहण गर्‍यो।
Fikayo Tomori अन्ततः डर्बी काउन्टी पहिलो टीम मा एक सफलता अर्जित। उनी प्राइड पार्क आइपुग्ने बित्तिकै मैदानमा हिर्काए, चैम्पियनशिपको प्ले-अफ फाइनलमा पुग्न तिनीहरूलाई मद्दत गरे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… तोमोरीको उत्कृष्ट मौसम अपरिचित भएन। उसको नाम थियो वर्षको डर्बीको खेलाडी क्लबसँग उनको पहिलो सत्रको अन्त्यमा। यसले उनलाई यो पुरस्कार जित्ने पहिलो loanण खेलाडी बन्ने क्लब रेकर्ड कमायो। उनले यो चेल्सी एफसी लेजेन्डको निर्देशनमा प्राप्त गरे। फ्रैंक लम्पर्ड.
Fikayo Tomori फ्रान्क लैम्पार्डको साथ उनीहरूको डर्बी वेभएजको बखत। आईजी लाई क्रेडिट
बीच सम्बन्ध Lampard र टोमोरी त्यहाँ रोकिएन। दुबै खेलाडी र प्रबन्धक डर्बीमा आफ्नो समय पछि स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा पुनर्मिलन भए। लाम्पार्डले विस्थापित गरेपछि यो भयो Sarri चेल्सी काम को लागी।
2019 / 2020 seasonतुको आधारमा, यो स्पष्ट छ कि ल्याम्पार्डले टोमोरीलाई धेरै सम्मानमा राख्छ। यो केवल समयको कुरा हो जब टोमोरी फ्यानको र ब्यबस्थापकको मनपर्दो केन्द्र लन्डन क्लबको लागि फिर्ता मनपर्दो बन्छ। उसको टुटेको सपना अब पूरा हुन लागेको छ र बाँकी, तिनीहरूले भने, अब इतिहास हो।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको प्रसिद्धिमा बृद्धि संग, यो निश्चित छ कि अधिकांश चेल्सी प्रशंसकहरूले फिकायो टोमोरकी प्रेमिका को हुन भनेर सोधपुछ गरेका थिए। हो! त्यहाँ कुनै तथ्य छ कि उसको कालो-सुन्दर देखिन्छ आफ्नो खेल को शैली संग उहाँलाई महिला एक प्यारो दाखको बोट बनाउन छैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार छैन।
चेल्सी फ्यानहरूले भर्खर सोधेको… .फिकायो टोमोरकी प्रेमिका को हो ?. आईजी लाई क्रेडिट
तोमोरी सोशल मिडिया ह्यान्डलहरूमा उपलब्ध जानकारीको आधारमा, यस्तो देखिन्छ कि उसले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचायो (लेखेको समयमा)। यो तथ्यले हामीलाई उसको सम्बन्ध जीवन वा डेटि history ईतिहास सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी स collect्कलन गर्न गाह्रो बनाउँदछ।
फेरि, फिकायो टोमोरीलाई थाहा छ कि चेल्सी फ्यानहरू र व्यवस्थापकहरू आगामी युवाहरूको लागि धेरै अन-माफ गर्न सकिन्छ जुन क्लबले loanण खेलाडीहरूको बटालियन हुनुको एउटा कारण हो। तसर्थ, यो पनि सम्भव छ कि टोमोरीको प्रेमिका हुन सक्छ तर उनको सम्बन्धलाई सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दछ, कम्तिमा अहिलेको लागि.
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
आफ्नो फुटबल क्यारियरबाट टाढा फिकायो टोमोरी पर्सनल लाइफलाई चिन्नुले तपाईंलाई उनको जन्मजात व्यक्तित्वको अझ राम्रो र पूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गर्दै, फिकायो टोमोरी एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले क्यारियर गतिविधिबाट टाढा हुन्छ, जीवनको वास्तविक अर्थको खोजीको लागि एक्लै र सबै कुराबाट टाढा बिताउने प्रयास गर्दछ। तोमोरी आफ्ना विचारहरूलाई ठोस कार्यहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्षम छन्, जुन उसले खेलको पिचमा राख्छ।
Fikayo Tomori व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु। आईजी लाई क्रेडिट
दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने टोमोरीले गैर-करियरको समयमा सम्भव भएसम्म यसलाई अनुभव गर्नको लागि संसारसँग सम्पर्कमा रहन मन पराउँदछ।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
जब यो परिवारको कुरा आउँछ, फिकायो टोमोरी समर्पित छन् र आफ्नो बुबा, आमा र धेरै राम्री बच्चा बहिनीलाई खुशी बनाउन मानवीय रूपमा सम्भव भए पनि केहि गर्न इच्छुक छन्। उसको परिवारले देखेका तत्कालिन उनीहरुको सफलताको लागि लन्डनमा धेरै खुशी जीवन बिताउँछन्।
तोमोरी आफ्नो नजिकको परिवार संग पोष्ट। आईजी लाई क्रेडिट
सबै परिवारका सदस्यहरू उनीहरूको प्रथम श्रेणी नाइजेरियाली जरामा गर्व गर्छन् र यसलाई प्रदर्शन गर्न कहिल्यै लजाउँदैनन्। यो स्पष्ट छ कि दुबै बुबा, आमा र बच्चा बहिनी सबै फिक नाइजेरियाली राष्ट्रिय टीमको लागि खेल्न चाहन्छन्। जबकि फिकायो टोमोरीकी आमा र बच्चा बहिनीले कम कुञ्जी जीवन बिताएको छ, जबकि उसको बुवा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो छोराको क्यारियरको प्रगतिमा संलग्न हुन्छन्।
उनको छोरालाई हेर्नको लागि उत्साह: तपाईंलाई थाँहा थियो?… डर्बी काउन्टीमा हुँदा टोमोरीले मन्चेस्टर युनाइटेडलाई पेनाल्टी शुटआउट्स मार्फत काराबाओ कपबाट नाटकीय ढ elim्गले जित्न मद्दत गरे। उसको बुबाको भन्दा अरु कोही खुशी थिएनन् जसले आफ्नो छोराको स्मारक विजयको लागि उत्साह र उत्साह मा उफ्रियो। तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
खेल पछि टोमोरीले उसको बुबाको परिवारको बैठक कोठामा उफ्रिने र नाच्ने सोशल मीडियामा भिडियो पोस्ट गर्‍यो।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
टोमोरी लेखेको समयमा7मिलियन पाउन्डको बजार मूल्य छ जुन वृद्धि गर्नु हो। यो धेरै मूल्यवान हुनु कुनै पनि हिसाबले ग्लैमरस जीवनशैलीमा अनुवाद गर्दैन, जुन एक मुट्ठी भर विदेशी कारहरू, हवेलीहरू र भारी swagger द्वारा सजिलैसँग देख्न सकिन्छ।
Fikayo Tomori LifeStyle तथ्यहरु
टमोरीका लागि सामान्य जीवन बिताउन सधैँ पैसा हुन्छ। फेरि, तपाईंलाई थाहा दिन, उसको वित्तीय सफलता सीधा बाँधिएको छैन उसको प्रदर्शनसँग फुटबलरको रूपमा कि उहाँ एक धनी परिवारबाट आउनुहुन्छ भनेर।
Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
1997, वर्ष टोमोरी जन्म भएको थियो "टायटानिक" शीर्षकको नाटक / प्रकोप चलचित्रको विमोचनमा जो अहिले पनि इतिहासको सबैभन्दा रमाईलो कथाहरू मध्ये एक हो।
एक्सएनयूएमएक्स वर्ष टाइटैनिक रिलीज भयो।
त्यो वर्ष 1997 ले मानिसहरुको राजकुमारीको मृत्युलाई पनि चिह्न दियो जसलाई संसारले "राजवंश डि“। तल चित्रमा लेट राजकुमारी डायना पेरिसमा मरे, कार दुर्घटनामा जब पपाराजी पछिन।
राजकुमारी डायना वर्ष 1997 मा निधन भयो। दैनिक एक्सप्रेस लाई क्रेडिट
सम्मान र पुरस्कार: तोमोरी ती युवा फुटबलरहरू हुन् जससँग उनले खेलेको लगभग हरेक टोलीमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्, धेरै ट्राफीहरू र व्यक्तिगत सम्मानहरू र्याक गर्ने समयमा तल देखाइएको अनुसार।
सारांश मा Fikayo Tomori रेकर्ड र सम्मान। क्रेडिट सूर्य
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Fikayo Tomori बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।